Apple WWDC Scholarship 2021/2022 Ona Kunyorera Gadziriso Portal: Yazvino Chikoro Nhau
Apple WWDC Scholarship: Senzira yekutenda vatengi vake, Apple iri kupa kudzidza kuvadzidzi. Zvakare, iyi dzidziso ndeyekubatsira vadzidzi vane dambudziko remari kuenderera mberi nedzidzo.
Zvakare, zvinotarisirwawo mukuvaka kugona uye kusimudzira hunyanzvi hwevanhu. Saka nekudaro, zvakakosha kuti uzviedze. Iwe hauna chaucharasikirwa kana ukadaro. Nekudaro, iwe uchave nezvakawanda zvekuwana kana iwe ukasarudzwa.
Nekudaro, kuti udzidze zvakawanda nezve maitiro / kupi ekunyorera, ingoenderera mberi kuverenga ino. Ichatungamira. Zvakare, iyo inokupa iwe rese iro rekutanga ruzivo iwe rwaunoda.
About Apple Inc. Kambani
Usati watarisa iyo Apple WWDC Scholarship, cherekedza. Apple Inc. ikambani yeAmerican multinational technology. Uye inotungamirwa muCopertino, California. Zvakare, inogadzira, inovandudza, uye inotengesa zvemagetsi zvemutengi, software yekombuta, uye masevhisi epamhepo.
Uyezve, Apple inoonekwa seimwe yemakambani makuru eTekinoroji. Uye izvi zviri padivi peAmazon, Google, uye Microsoft. Apple's Hardware zvigadzirwa zvinosanganisira:
Iyo iPhonesmartphone uye iyo iPad piritsi komputa.
Uyezve, iyo Macpersonal komputa uye iPod inotakurika midhiya mutambi.
Zvakare, iyo Apple Watchsmartwatch uye iyo Apple TV yedhijitari midhiya inoridza.
Uyezve, iyo AirPodswireless earbuds uye HomePod smart mutauri.
Uyewo, apuro zvakare ine yakawanda ye softwares. Zvimwe zvacho zvinosanganisira macOS, iOS, iPadOS, watchOS, uye maTV anoshanda masystem. Apple yakavambwa naSteve Jobs, Steve Wozniak, naRonald Wayne muna Kubvumbi 1976
Kuti uve unofanirwa kunyorera iyo Apple WWDC Scholarship, unofanirwa:
Iva nemakore gumi nematatu ekuberekwa kana kupfuura. Zvakare, kana iro rakaenzana pazera zera mudanho rakakodzera. Semuenzaniso, makore gumi nematanhatu ekuberekwa muEuropean Union.
Zvakare, kunyoreswa mahara neApple semugadziri weApple. Kana kuve nhengo yeakabhadharwa Apple Developer Chirongwa.
Pamusoro pezvo, kunyoreswa mune yakasarudzika fakaroti institution kana yepamutemo chikoro chekumba chakaenzana
Zvakare, vapedza chikoro chesekondari kana zvakaenzana. Uye izvi zvinofanirwa kunge zviri mukati memwedzi yapfuura ye6 uye zvichitarisira kugamuchirwa kunzvimbo inodzidziswa.
Uyezve, iva nhengo inoshingaira yesangano re STEM. Uye inozivikanwa zviri pamutemo sesangano risingabatsiri.
Izvo zvakakosha kuti iwe utarise iyo inotevera ruzivo usati wanyorera yeApple WWDC Scholarship. Kunze kwenzira yekukodzera pamusoro, iwe unofanirwa kubvuma kune izvi WWDC Scholarship Mitemo nemamiriro.
Nekudaro, kana iwe usingabvumirani, usashandise. Nekunyorera, iwe uri kubvuma kusungwa nematemu ese. Zvakare, kukodzera kunoenderana nekusimbiswa neApple. Uye iwe unofanirwa kubvuma kushandira pamwe neApple kuti upe ruzivo nezve chinzvimbo chako chedzidzo uye chinzvimbo chenhengo.
Uyezve, vashandi, vadzidzi, vanobatana, vanobatsirana, kushambadzira uye ekushambadzira vamiririri veApple Inc. havana kukodzera. Zvakare, vepedyo vemhuri uye / kana avo vanogara mumhuri imwechete yemapati akadaro havana kukodzera.
Kuzviisa Zvinodikanwa zve Apple WWDC Scholarship
Izvi zvinotevera zvinodiwa kuti usvitse chikumbiro chako cheApple WWDC Scholarship:
Iwe unofanirwa kuzadza ese anodikanwa masimi pane fomu rekunyorera kudzidza. Uye isa zvese zvinodikanwa mafaera uye zvinyorwa usati waendesa.
Zvakare, kana iwe ukanyorera semudzidzi, cherekedza. Iwe unofanirwa kupa iyo PDF, PNG, kana JPG yeyako yazvino kirasi purogiramu. Kana humwe humbowo hwazvino hwekunyoresa uye ruzivo rwekuonana kune wako wedhina kana mukuru.
Nekudaro, kana iwe ukanyorera senhengo yesangano re STEM kana yeApple Developer Academy, cherekedza. Iwe unofanirwa kupa iyo PDF, PNG, kana JPG yehunhu hwako ruzivo uye nemutungamiri wemunharaunda ruzivo rwekuonana. Zvinyorwa zvinogamuchirwa mumitauro yese.
Zvakare, iwe unofanirwa kuendesa Swift nhandare yekutamba yakavakirwa neSwift Playgrounds 2.2 kana Xcode 10.1. Xcode mapurojekiti haazotariswe.
Zvimwe Zvekutumira Zvinodikanwa zve Apple WWDC Scholarship
Uyezve, yako Swift nzvimbo yekutamba inofanirwa kunge yakagadzirwa newe semunhu. Kana kuve wakavakirwa pa = Swift Playgrounds template yakagadziridzwa newe semunhu. Basa reboka harizotariswe.
Zvakare, yako Swift nzvimbo yekutamba inofanirwa kunge ichishanda zvizere uye unomhanya paSwift Playgrounds 2.2 kana Xcode 10.1. Nekudaro, kana ichimhanya paSwift Playgrounds 2.2, inofanirwa kuve yakagadzirirwa kuratidzwa mushe pane ese mamodheru ePad Pro.
Pamusoro pezvo, kuendesa kunozotongwa kunze kwenyika. Nekudaro, yako Swift nzvimbo yekutamba haifanire kuvimba nenetiweki yekubatanidza. Uye chero zviwanikwa zvinoshandiswa mune yako Swift nhandare inofanirwa kuverengerwa imomo mune yako .zip faira.
Zvakare, iwe unofanirwa kupa mhinduro yenyaya yakanyorwa newe kune yese mibvunzo inodiwa mufomu rekunyorera.
Pamusoro pezvo, Swift nhandare yekutamba inofanirwa kunyorwa muSwift Playgrounds 2.2 kana muXcode 10.1. Zvakare, iwe unofanirwa kutevedzera zvirevo zveSwift Playgrounds Software License Chibvumirano kana iyo Xcode uye Apple SDKs Rezinesi Chibvumirano.
Nekudaro, iwe unogona kungoendesa chete chikumbiro pamunhu kune iyo Apple WWDC Scholarship. Uye kudzidza kumwe chete kuchapihwa pamunhu wega.
Zvakare, kutumira kwedzidzo kunogamuchirwa chete kuburikidza nefomu inowanikwa pa HERE. Kutumira hakugamuchire kuburikidza chero imwe chiteshi kana mushure mekutumirwa kwavharwa.
Kuendesa kwekunyorera kweApple WWDC kudzidza kunotongwa zvichibva pane zvinotevera:
Unyanzvi hwekuita mune yakatumirwa Swift nhandare.
Zvakare, kugona kwemazano munzvimbo yakatumirwa Swift yekutamba.
Uyezve, zvirimo zvemhinduro dzakanyorwa kumibvunzo iri fomu rekunyorera.
Sarudzo dzese dzinoitwa nevatongi ndedzekupedzisira uye kurova zvakavanzika. Kana zvikaitika kuti tai, zvido zvichapihwa kune anenge achitsvaga uyo asati ambowana kudzidza. Kana mupi asingakwanise kuenda, Apple inogona kubata iye anenge achinyorera nechikwata chinotevera chepamusoro, pahungwaru hweApple chete.
Zvikonzero zvekuregeredzwa Kunyorera kweApple WWDC Scholarship
Kuendesa kwako kungangotariswe kune iyo Apple WWDC Scholarship kana ikasateedzera zvese kukodzera uye kuzviisa zvinodiwa. Zvakare, kana kana ikasangana nechero ipi yemamiriro akanyorwa pazasi:
Yako Swift nzvimbo yekutamba haishande panguva yekutonga maitiro.
Zvakare, iyo Swift yekutamba iwe yaunopa haina kuvakwa newe. Kana yakavakwa nevanhu vanopfuura mumwe. Nekudaro, basa reboka harizotariswe. Zvakare, rakabirirwa basa harizotariswe uye rinogona kukukanganisa iwe kubva mune ramangwana mikana yekufunda.
Uyezve, yako Swift nzvimbo yekutamba inoda kusaina.
Uyezve, iwe unoteedzera uye / kana kuisa analytics kodhi mune yako Swift nhandare inoreva kuziva kana kuteedzera mashandisiro kana vatongi.
Rwakakosha ruzivo nezve Apple WWDC Scholarship
Pamusoro pezvo, Apple inochengetera kodzero yekuregeredza yako yazvino uye / kana yekutumira mune ramangwana. Kana kurega kana kudzosera yako kudzidza uye / kana pekugara chero nguva kana:
Iwe unoendesa zvinopfuura imwe fomu rekunyorera kudzidza. Nekudaro, munhu wega wega anotenderwa chete kuzviisa pasi.
Zvakare, chero chikamu chekutumira kwako hachisi chokwadi, chakanyorwa, kana chakagadzirwa.
Iwe unopinda kana kumbobvira waita kushungurudzwa kana humwe hunhu hunokuvadza hwakananga kuApple, vashandi veApple, vamwe vanyoreri vanyoreri, kana vanopinda WWDC
Zvakare, iwe unopihwa kudzidza uye usatore tikiti rako uye pekugara nenguva yekupedzisira. Kana kuzvigamuchira asi usapinda WWDC mazuva ese, kunze kwekunge zvakabvumiranwa neimwe Apple.
Zvakare, iwe unobvuma rubatsiro rwekufamba uye / kana pekugara asi usatarise mafambiro uye / kana pekugara marongero akaitwa neApple. Uye usazivise mumiriri weApple pamberi.
Zvakare, iwe unogara pane yakapihwa pekugara yeakasiyana date renji pane iya yakarongedzwa neApple pasina yakanyorwa mvumo kubva kuApple.
Iwe, zvakananga kana zvisina kunangana, unoita chero chiito chinotarisirwa kukanganisa chirongwa cheWWDC Scholarship. Kusanganisira asi isina kuganhurirwa mukunyepera kuzvidza vamwe vanyoreri kunyorera kuti vawane mukana wakanaka kwazvo wekugamuchira kudzidza.
Zvakare, kana kubata vashandi veApple kuti vakumbire kurapwa kwakanaka kwekutumira kwako.
Iwe (kana kutumira kwako) unokundikana kutevedzera izvi zvirevo nemamiriro.
Kunyorera Link ye Apple WWDC Scholarship
Kuti udzidze zvakawanda nezve Apple WWDC kudzidza (mubairo mabhenefiti, nguva yekupedzisira uye vamwe) CLICK HERE.
Ndokumbirawo muve nechokwadi chekuti munosangana nezvinodiwa musati maita. Zvakare, kuti zvijeke, ndapota unogona kuenda kuburikidza nechinyorwa ichi zvakare uye yehunyanzvi link yakapihwa. Izvi zvinobatsira kunzwisiswa kuri nani kwemapakeji eiyo masomo. ROMBO RAKANAKA sezvaunoshandisa.
Yemari Rekodhi Kuchengeta Mumachechi Masangano
StarSat Channel, Mapakeji neMitengo 2020 Yakazara Nhoroondo
Tarisa WHO Akasarudzika Musarudzo 2020/2021 PDF Chinyorwa Chidhawunirodha
Nyorera Izvozvi Kune Nyowani Dhavhidha Massive Job Mikana muLagos kuKuramo Industries
NDLEA Kutsvaga Pfupiso 2021 Tarisa Akabudirira Vanyoreri Mazita
FUTMINNA Tumira UTME / DE Fomu 2020/2021 Session Screening Chikumbiro
Zvematongerwo Enyika Ehupfumi Yehuwori uye Anodzora Masangano muNigeria: Kutarisisa paEconomics uye Zvemari Mhosva Commission (Efcc), 2000-2010
« JAMB UTME Kunyoresa Fomu 2021 Ona Maitiro Ekutenga Fomu uye Nyorera
ICCR Scholarshipi yeBangladeshi Vadzidzi 2021/2022 Portal Dzidzo »